I-125 YEETATOO EZIBALASELEYO ZAMADODA: IIMBONO EZIPHOLILEYO + UYILO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-125 yeeTato zoMkhono eziBalaseleyo zaMadoda
Iitattoo zemikhono zivumela abafana ukuba bazise ezona zimvo zibalaseleyo ebomini. Njengokuba uluntu luqhubeka ukwamkela ubugcisa bomzimba, ii-sleeve tattoos zamadoda ziya zithandwa njenge…
Iitattoo zemikhono zivumela abafana ukuba bazise ezona zimvo zibalaseleyo ebomini. Njengoko uluntu luqhubeka nokwamkela ubugcisa bomzimba, ii-sleeve tattoos zamadoda zifumana ukuthandwa njengeendlela zokuzibonakalisa. Ngapha koko, umvambo opheleleyo womkhono unika abafana amandla okwenza i-inki eyahlukileyo, ubugcisa kunye noyilo lwe-badass ukwenza ubugcisa obugqwesileyo ingalo . Nokuba ikota eyoyikekayo okanye umkhono wesiqingatha unokumangalisa kuyilo olufanelekileyo. Kodwa ngeemikhono ezininzi ezipholileyo zetattoo yamadoda anokukhetha kuzo, kunokuba ngumceli mngeni ukufumana umzobo ogqibeleleyo womkhono wakho.
Ukukunceda ufumane imixholo ekhuthazayo, siye saqulunqa uyilo lwe tattoo lomkhono ophezulu. Ukusuka kwisiqingatha ukuya kumvambo wengalo opheleleyo, nazi iitatoo zemikhono ezilungileyo zamadoda.
1Imibono yeTattoo enemikhono emitsha
MbiniImikhono yeTattoos yamadoda
2.1Umkhono wesiqingatha seTattoo
2.2Umkhono opheleleyo weTattoo
2.3Ubungakanani, ukubekwa kunye noCwangciso
2.4Umbala, Mnyama, Ngwevu, kunye noMkhono omhlophe weTattoos
3Ezona zoyilo zeTatoo ziBalaseleyo
Imibono yeTattoo enemikhono emitsha
Ukuba ucinga ukufumana umkhono wamaphupha akho, kubalulekile ukuba uqwalasele zonke iingcinga ezingcono zomkhono we tattoo ngaphambi kokuhlala kuyilo lwakho oluthandayo.
Ngelixa ii-tatoo zemikhono emveli yemveli zibandakanya ukusebenzisa ingalo yakho yonke njengeseyile, unokufumana i-tattoo yomkhono onesiqingatha kwingalo yakho ephezulu okanye ingalo Ude ufumanise umxholo omnandi kwabanye.
Nokuba uyafuna ukakayi ubuhlanga, indalo, inkolo, ingelosi, usapho , izinto eziphilayo, Ingonyama , Ingcuka , inamba , Mkristu, umnqamlezo , Norse God, 3D, Celtic, okanye tattoo emnyama yomkhono omnyama nomhlophe, kukho inani loyilo olwahlukileyo lokuhlola.
Ngokunikwa kokubonakala, ubungakanani kunye nemilo yomkhono ogcweleyo, sicebisa ukuba uthathe ixesha lakho ekuthatheni isigqibo malunga nokuba uza kwenza ntoni. Umdibaniso olungileyo wemizobo kunye nemifanekiso inokubangela eyona mkhono we-badass.
Imikhono yeTattoos yamadoda
Umkhono wesiqingatha seTattoo
I tattoo enemikhono yesiqingatha inokuba yeyona ndlela ilungileyo kubafana abafuna isuntswana lobugcisa engalweni yabo, kodwa kufuneka babenakho ukuyigubungela eofisini okanye kwizihlandlo ezisesikweni. Ubungakanani woyilo bunokudlala indima ekukhetheni indawo enesiqingatha semikhono.
I tattoo yengalo ephezulu inokukusongela bicep , triceps, igxalaba, isifuba kwaye umva , ngelixa ingalo engezantsi okanye itattoo yangaphambi kwayo inokwandiswa iye esihlahleni, isandla neminwe.
Ekugqibeleni, ii-tattoos ezinesiqingatha semikhono yamadoda zibukeka zintle kwaye ziyimbali!
Umkhono opheleleyo weTattoo
I tattoo yomkhono opheleleyo igubungela yonke ingalo, isuka egxalabeni iye esihlahleni. Ngomfanekiso omkhulu kangako, amagcisa ayakwazi ukwenza umsebenzi wobugcisa ngokupheleleyo.
Umzekelo, unokufuna uninzi oluncinci, iziqwenga zengalo ezilula ukwenza ikholaji yemifanekiso esasazeke engalweni yakho kwaye idityaniswe kunye noyilo olunemibala okanye oluqhelekileyo. Ezi zoyilo zinokuba nobuchule, zibe nentsingiselo okanye zoyike nje.
Ngeli xesha, abanye abantu bakhetha umzobo opheleleyo okanye umxholo omnye wokufana kwindawo yonke. I-tattoo ye-3D enomatshini enegiya ezikrazula ulusu iya kuba lolona khetho lubalaseleyo.
Ngethamsanqa, ii-tattoos zemikhono yamadoda zinokufumana uluhlu lweendlela. Eyaziwayo kunye nefashoni, umkhono opheleleyo ugcinelwe abathanda kakhulu ukuzibophelela.
Ubungakanani, ukubekwa kunye noCwangciso
Emva kokukhetha uyilo okanye isitayile, umculi wakho we tattoo unokukunceda ngokufaka ubungakanani kunye nokubekwa. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba ii-sleeve tattoos zinokuthatha iiseshoni ezininzi ukugqiba kwaye zibiza kakhulu, ke qiniseka ukubuza umculi wakho malunga neendleko kunye nokufumaneka kwakhe ngaphambi kokuba ubhukishe idinga lakho.
Umbala, Mnyama, Ngwevu, kunye noMkhono omhlophe weTattoos
Kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na umbala okanye uyilo nge-inki emnyama, ngwevu nomhlophe kuphela. Ngokubanzi, i-sleeve tattoo enombala iyaphakamisa kwaye iyonwabile, ngelixa i-tattoo emnyama kunye emhlophe okanye emnyama nangwevu ibonakala ijonge ngakumbi emadodeni kwaye iyoyikisa.
iinwele ezinde zeenwele amadoda
Njengomzekelo, sicebisa ukuba mnyama, ngwevu okanye luhlaza okwesibhakabhaka yoyilo lwesizwe olujikeleza ubude bengalo yakho.
Kwelinye icala, umkhono wendalo we tattoo obandakanya iintyatyambo, iintaka, amanzi, imihlaba kunye namalangatye anokujongeka ngcono ngombala opheleleyo.
Umculi wakho unokukwazi ukukubonisa imizekelo ye tattoo efanayo yomkhono kubo bonke abamnyama kunye nombala ukukunceda ukuba ubone i-inki yakho kwaye wenze isigqibo esinolwazi.
Ezona zoyilo zeTatoo ziBalaseleyo
Ukuba ujonge ukhuthazo oluthile, jonga igalari yethu yezona zilo zintle ze tattoo zamadoda. Ukusuka kwiikhakhayi kunye needragoni ukuya emnqamlezweni wenkolo kunye nobuso bukaYesu, ezi zezona zipholileyo zinemikhono egcwele imikhono kumadoda!
amadoda atshayelwe ngeenwele ecaleni
amadoda asian iinwele ezimfutshane
isimbo seenwele ezinde zamadoda
I-101 Iitattoos eziBalaseleyo zeDragoni yamadoda
Uyilo lweenwele ezipholileyo ezingama-37 zamadoda
I-101 yeeTattoos eziPhezulu zePhoenix zaMadoda
I-50 yeeNwele eziFutshane eziFutshane zaMadoda
Icala lokuTsalwa kweenwele zaMadoda
I-25 yeDrop Fade yokucheba iinwele
Yintoni Uphawu Lwam lweNyanga? (+Isibali-manani sasimahla seNyanga)
ii-tattoos zengalo ezisezantsi ziyilo
Ukucheba kweenwele zamadoda kuyaphela
iinwele zoyilo loyilo lwamakhwenkwe
uyilo lweenkwenkwezi kwizinwele
amadoda amnyama acheba iinwele ngo-2019
I-35 yeenwele zeNtsimbi eziBalaseleyo zaMadoda aneZintloko eziPhambili